गोविन्द केसीलाई पक्राउ गराउन नेकपाका युवा नेताहरु सक्रिय, प्रचण्ड र बादल तनावमा — Imandarmedia.com
काठमाडौं । संसदको बहुमतले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् ।
विधेयकको पक्ष र विपक्षमा सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक तथा गोविन्द केसी पक्षधर दल, तिनका कार्यकर्ता र समर्थक उग्र बहसमा उत्रिएका छन् । नेकपाका प्रशावशाली युवा नेता तथा अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यबारे निकृष्ट अभिव्यक्ति दिएकाले उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग बस्नेतको छ ।
बस्नेतले अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउन खोज्ने केसीले आफैं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तलबभत्ता खाएर विद्यार्थी पढाउन र अपरेशन गर्न छाडेर नरन्तर आन्दोलन र अनशन गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै देशका प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरुलाई चोर, डाँका, माफिया आदि भन्दै अनादरार्थी तुच्छ गाली गर्ने गरेको र पछिल्लोपटक आफैंले जागिर खाने विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लिखित रुपमा निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेकाले उनलाई विन्द केसीलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
‘गोविन्द केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तलवभत्ता खाएर वसेका एक स्थायी प्राध्यापक हुन् । अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउन खोज्ने केसी आफै पढाउन र अप्रेसन गर्न छाडेर निरन्तर अनसन वस्छन्, आन्दोलन गर्छन् । भिसि, रेक्टर , रजिस्ट्रार कसैलाई फिटिक्कै टेर्दैनन्। यतिसम्म पनि ठिकै छ ।’ उनले भनेका छन्- ‘वेलावेलामा देशका प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरुलाई चोर, डाका, माफिया आदि भन्दै अनादरार्थी तुच्छ गाली गर्ने पनि छदैछ। हुँदाहुँदा आफैंले जागिर खाने विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली ज्युलाई लिखित रुपमा नै जुन निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेका छन्, त्यस आधारमा डा. गोविन्द केसीलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कार्वाही गर्नुपर्छ। अब अति भयो ।’
शुक्रबार संसदको बहुमतले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए । विज्ञप्तिमा केसीले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र उनले सेवन गरिरहेको औषधिका कारण निर्णय क्षमता प्रभावित भएको कठोर टिप्पणी गरेका थिए ।
विद्यार्थी सँगसँगै नेकपाका अन्य नेताहरु पनि डा केसीलाई गिरफ्तार गर्न प्रचण्ड र बादललाई दबाब दिन थालेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वदेश फर्किएपछि यसविषयमा कुरा गर्ने भनेर प्रचण्डले नेताहरुलाई थामथुम पारेको बुझिएको छ ।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा विद्येयकको पक्ष र विपक्षमा आज माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । अनशनरत डा गोविन्द केसी र विजय थापाका पक्षधरले विद्येयकको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गरेका हुन् । सोलिडारिटी फर डा केसी एलाइन्सले शुक्रबार संसद्बाट पारित विद्येयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन् भने थापाका समर्थकले सार्वभौम संसद्को सम्मान गदै विद्येयक लागू गराउन माग गरेका छन् ।
संसद्ले शुक्रबार बहुमतबाट विद्येयक पारित गरेको थियो । डा केसी समर्थकले ‘केसीसँग गरिएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने’, ‘विद्येयकबाट बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।
त्यसैगरी निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका निम्तिः संयुक्त सङ्घर्ष समितिले ‘चिकित्सा शिक्षा विद्येयक कार्यान्वयन गर’, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारजस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर’ भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । चिकित्सा सुधारको माग गर्दै डा केसी गत पुस २५ गतेदेखि अनशनरत रहेका छन् ।
हेर्नुहोस् बस्नेतको स्टाटस